ရိုးမရိပ်သာမှ အဆောင်သစ်များအား Quarantine Center ပြုလုပ်ရန် အဲယားကွန်းအလုံးပေါင်း ၅၂၀ တပ်ဆင် – CharTake
ရိုးမရိပ်သာမှ အဆောင်သစ်များအား Quarantine Center ပြုလုပ်ရန် အဲယားကွန်းအလုံးပေါင်း ၅၂၀ တပ်ဆင်
chartake | October 1, 2020 | Local News | No Comments
ရိုးမရိပ်သာ အဆောင်သစ်များအား Quarantine Center ပြုလုပ်ရန် အဲယားကွန်းအလုံး ၅၂၀ တပ်ဆင်
ဒဂုံမြို့သစ် ( တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ ရိုးမရိပ်သာ အဆောင်သစ်များတွင် Quarantine Center အဖြစ် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် အဲယားကွန်းအလုံးရေ ၅၂၀ ကို ၃ ရက်အတွင်း အပြီးတပ်ဆင်သွားမည်ဟု အဲယားကွန်းနှင့် အအေးပေးလုပ်ကိုင်သူများအသင်း (ရန်ကုန်) ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ အဲယားကွန်း အလုံးရေ ၅၂၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ အသင်းမှ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီး အဲယားကွန်းနှင့်အအေးပေး လုပ်ကိုင်သူများအသင်း (ရန်ကုန်) မှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၆၀ ကျော်က အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ စတင် ၍ တပ်ဆင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ ( အောက်တိုဘာ ၁ ရက်) တွင် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ Source ; စံတော်ချိန်
Unicode … ရိုးမရိပျသာ အဆောငျသဈမြားအား Quarantine Center ပွုလုပျရနျ အဲယားကှနျးအလုံး ၅၂၀ တပျဆငျ
ဒဂုံမွို့သဈ ( တောငျပိုငျး) မွို့နယျရ ရိုးမရိပျသာ အဆောငျသဈမြားတှငျ Quarantine Center အဖွဈ တိုးခြဲ့ဖှငျ့လဈရနျအတှကျ အဲယားကှနျးအလုံးရေ ၅၂၀ ကို ၃ ရကျအတှငျး အပွီးတပျဆငျသှားမညျဟု အဲယားကှနျးနငျ့ အအေးပေးလုပျကိုငျသူမြားအသငျး (ရနျကုနျ) ထံမ သိရသညျ။
အဆိုပါ အဲယားကှနျး အလုံးရေ ၅၂၀ ကို မွနျမာနိုငျငံ လိုငျစငျရကနျထရိုကျတာမြား အသငျးမ လဒါနျးခွငျးဖွဈပွီး အဲယားကှနျးနငျ့အအေးပေး လုပျကိုငျသူမြားအသငျး (ရနျကုနျ) မ လုပျငနျးအဖှဲ့ ၆၀ ကြျောက အခမဲ့ တပျဆငျပေးခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါ တပျဆငျခွငျးလုပျငနျးကို စကျတငျဘာ ၂၈ ရကျမ စတငျ ၍ တပျဆငျပေးနခွေငျးဖွဈပွီး ယနေ့ ( အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ) တှငျ အပွီးသတျ လုပျဆောငျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရပါသညျ။ Source ; စံတျောခြိနျ
ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ AYA Bank ရဲ့ ATM စက် ဖောက်ထွင်းခံရမှုဖြစ်ပွား
သူပိုင်ဆိုင်သည့် ရုပ်ရှင်ရုံများကို ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာများအဖြစ် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး လွင်မိုး
မန္တလေးဆေးရုံကို ဖျားပြီးရောက်လာကာ နာရီပိုင်းအကြာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သည့် လူနာကိုစစ်ဆေးရာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိ
ယနေ့ည ( 21 . 8 . 2020 ) တွင် စစ်တွေမြို့မှ COVID -19 ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာ ၁၀ ဦး ထပ်တိုး